Fitaovana maharitra - Suzhou MENTIONBORN Industry And Trade Co., Ltd.
Ahenao ny famoahana entona dioksida
Ahena ny loto
Tombony azo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
Ny fananganana ny fananganana «ECO CIRCLE» dia afaka mampihena be ny enta-mavesatra amin'ny tontolo iainana.
Fanaraha-maso ny fampiasana loharanom-pahalalana reraka.
Afaka mifehy ny fampiasana akora solika vaovao izay mifehy ny akora polyester.
Fampihenana ny famoahana entona entona (CO₂)
Raha ampitahaina amin'ny fomba fanariana insineration dia afaka mampihena be ny famoahana entona entona.
Mifehy ny fako
Ireo vokatra polyester efa niasa dia tsy fako intsony fa azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby toy ny harena. Afaka mandray anjara amin'ny fifehezana ny
Tsy misy olona te-hanome akanjo tonta, ary mampalahelo ny manary azy ireo. Raha te-hanome ianao dia tsy fantatrao hoe aiza no hanome azy ireo. Ny akanjo taloha be dia be dia be dia be dia be, ary tsy maintsy tsaboina toy ny fako izy ireo rehefa ela. Tsy vitan'ny hoe miteraka fako, fa mandoto ny tontolo iainana koa. Araka ny antontan'isa, akanjo an-taonina maro no miditra ao amin'ny toerana fandevenana isan'andro, ary hodi-biby vita tanana no hijanona eto an-tany an-jatony taona maro, ka handoto ny loharanon'ny tany sy ny rano.
Ny fanarenana akanjo taloha, fampiroboroboana ny fampiasana indray ny loharanon-karena, ary ny fihenan'ny fandotoana ny tontolo iainana dia hao'shi be asa ...
Amin'ny fampiasana fitafiana fako, fako ary fitaovana polyester fako hafa ho toy ny akora voalohany dia ahena ho polyester amin'ny alàlan'ny famotehana simika tanteraka, ary namboarina ho lasa polyester polyester azo ampiasaina tsara, avo lenta, azo zahana ary maharitra. Ny vokatra dia be mpampiasa Amin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena avo lenta, fitafiana matihanina, fanamiana an-tsekoly, lamaody lehilahy sy vehivavy, lamba lamba sy kojakojam-pandriana, atiny fiara, sns., Amin'ny tena dikany, mahatsapa boribory mihidy sy maharitra amin'ny akanjo izy io. amin'ny akanjo. Satria mamaha fa ny lamba fanary dia azo averina miverimberina, mampihena amin'ny fomba mahomby ny fampiasana loharanon-tsolika ary mampihena ny fako.
Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy,